November 23, 2019 - ThutaSone
ကလေး မိဘများ အထူး သတိပြုကျပါ ဗျာ ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ အကြီးအကျယ်တောင်းကြမ်းနေ
November 23, 2019 ThutaSone 0
ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ကလေးသူခိုးများအကြီးအကျယ်တောင်းကြမ်းနေ မြစ်ကြီးနား၊ ယုဇနမှာ မိခင်တဦး ဆိုင်ကယ်ရှေ့မှာ သူမ ကလေးတင်ထားပြီး လမ်းဘေးခဏရပ်နေချိန် ကားအကောင်းစားနဲ့လူတစု ကလေးလုယူကာကားပေါ်တင်ပြေးသွားတယ်၊ လိုက်အော်လည်းမရတော့ဘူးလို့ ကလေးမိဘပြောပြသည်။ ကားမှန်တွေလည်း အနက်ရောင်စတီကာအပြည့်ကပ်ထားတယ်။အလာတူဖြစ်စဉ်မျိုးနောင်နန်း၁၀မိုင်မှာလည်း မိခင်နှင့်၎နှစ်အရွယ်ကလေး အတူလမ်းလျှောက်နေစဉ် အနက်ရောင်ကားတစ်စီအနားကပ်လာပြီးကလေးလက်ကိုလာဆွဲစဉ် မိခင်မှပတ်ဝင်းကျင်ကိုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလိုက်စဉ်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းကြားသိရသည်။ အဆိုပါကလေးသူခိုးများမှာ ယခုအခါကျောင်းဆင်းချိန်နှင့်အလပ်ချိန်များတွင်ကလေးငယ်များကို လိုက်လံချောင်းမြောင်းနေကြောင်းလည်းကြား သိရပါသည်။ ကျမတို့ကျောင်းနားမှာ ကားမှန်အပြည့်စတိကာအနက်ကပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီး၃/၄ခေါက်ပတ်မောင်းနေတာတွေ့လို့ထွက်ကြည့်လိုက်ရာအဆိုပါကားမှာမောင်းထွက်သွားကြောင်းကျောင်းဆရာမတစ်ဦးမှပြောပြသည်။ အဆိုပါကလေးများရဲ့ကိုယ်တွင်းကလီဇာများကို […]
တန်ခွန်ကျော် ထွက်ခွာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့လာ
တန်ခွန်ကျော် ထွက်ခွာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့လာ မြန်မာအိုင်ဒေါလ် အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ဒီကနေ့ညမှာတော့ Bottom ထိုင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ အက်စတာ၊ အေးမြဖြူ နဲ့ တန်ခွန်ကျော် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားသက်ဝင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်တွေရဲ့ မှတ်ချက်ကောင်းတွေရရှိခဲ့တဲ့ တန်ခွန်ကျော်ကတော့ Voting အနည်းဆုံးနဲ့ ထွက်ခွာခဲ့ရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို […]
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်သော ပုဏ္ဏားမိသားစုရှိရာတွင် ပုဏ္ဏားကြီးသည် မိမိကိုယ်ကို ဗေဒင်တွက်ကြည့်ရာ … အသက် (၆၀)ပြည့်သည့်နေ့တွင် သေရမည်ကို သိလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်သော်လည်း သေရမည်ကို ကြောက်လန့်၍ ဘုရားထံ သွားလေ၏။ ဘုရားရှင်ထံရောက်သော် မြတ်စွာဘုရားက ” မှန်၏။ အသက် […]
ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားနိုင်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသူများအတွက် မခွဲရဘဲပျောက်တဲ့ သဘာဝဆေး
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ …ကျနော်တို့ရဲ့ မီဒီယာစာမျက်နှာလေးက ပရိသတ်ကြီးတို့ အတွက် ဗဟုသုတ သတင်းစုံကို တင်ဆက်ပေးနေရုံသာမက ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ တန်ဖိုးထားတာကြောင့် ကျန်းမာရေးဆေးနည်းအကြောင်းလေးတွေကိုပါ ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်နော်… အခု ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားနိုင်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်းလေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆိုတာကတော့ နှလုံးသွေးကြောအတွင်း အဆီခဲများစုပုံလာတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပြီးတော့ နှလုံးသွေးကြောအတွင်း […]
ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းရည်အိုးကြီးထဲ ပြုတ်ကျလို့၊( ၃)နှစ်အရွယ်ကလေး သေဆုံး
ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းရည်အိုးကြီးထဲ ပြုတ်ကျလို့၊( ၃)နှစ်အရွယ်ကလေး သေဆုံး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဧရာမဟင်းရည်အိုးကြီးထဲ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက် အရှင်လတ်လတ် ချက်ပြုတ်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်ပြီး၊ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း The Sun သတင်းစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ဟာ အသက်(၃)နှစ်ပါ။ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အင်းအိုးကြီးဟာ ပဲနီလေးအဓိကပါဝင်တဲ့ အိန္ဒိယရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ရာ သီးစုံဟင်းချိုအိုးလို့ […]
ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ကြည့် ကြပါ…….လူတိုင်း ထီပေါက်ချင်ကြတယ်.. ဒီနည်းကို မသုံးကြလို့ မပေါက်ကြသေးတာပါ
Myanmar Idol တာဝန်ရှိသူ တွေ ကို သတိပေး ကြေငြာချက် စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Myanmar G21 Anonymous ဟက်ကာ အဖှဲ့
ပရိသတျမြား မယုံကွညျနိုငျဖွဈခဲ့ရတဲ့ Resultနဲ့ပတျသကျပွီး Myanmar Idolကို တိုကျခိုကျရနျ စာတဈစောငျထုတျပွနျလိုကျသညျ့ Myanmar G21 Anonymous Hackerအဖှဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါလ် အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ဒီကနေ့ညမှာတော့ Bottom ထိုင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ အက်စတာ၊ အေးမြဖြူ နဲ့ တန်ခွန်ကျော် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင်ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရှိထားတဲ့ တန်ခွန်ကျော်ဟာလည်း […]
နာမည်ကြီးနေတဲ့ (ခေတ်သစ် အရှင်သာရိပုတ္တရာ)
အာဖရိက တိုက် ယူဂန်ဒါမှာ ထွန်းလင်းနေသော လ တစ်စင်းဆရာတော်ရဲ့ ငယ်အမည်က စတီဗင် (ခေတ်သစ် အရှင်သာရိပုတ္တရာ)အာဖရိကတိုက်၊ ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံငယ်လေးက ခရစ်ယာန်မိသားစုမှာ Steven(စတီဗင်) ကို ၁၉၆၆-ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ငယ်ငယ်က ဘာသာတရားဆိုလို့ ခရစ်ယာန်နဲ့ အစ္စလာမ် ၂-ခုတည်းသာရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာပါ။ ၁၀ […]
တန်ခွန်ကျော် ရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ယောက် အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲ (ရုပ်သံ)
22.11.2019ညမှာ မြန်မာအိုင်ဒေါက ဘုတ်တင်အနည်းဆုံးပြိုင်ဝင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ဝင်ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ဘုတ်တင်အနည်းဆုံးနဲ့ ထွက်ခွာခဲ့ရတာတော့တန်ခွန်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ ဘုတ်တင်စနစ်ဟာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေလည်း ကျေနပ်တဲ့အဖြေမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျေနပ်အားရမှုမရှိ။ အခုဒီဗွီယိုလေးထဲမှာတော့ တန်ခွန်ကျော်ကို အားပေးနေတဲ့ ကလေးငယ်လေးဟာ တံခွန်ကျော် ထွက်ခွာသွားရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းစွာ ငိုနေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ အနုပညာကို ကလေးတွေတောင် […]
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကရာတေး ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဆုရသွားတဲ့ မြန်မာ ကလေးငယ် နှစ်ဦး
မလျှော့သောဇွဲလုံ့လနဲ့ ဘဝကို ကြိုးစားရပ်တည်နေသူတွေ လောကမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်…. ဒီလိုကြိုးစားရင်း မိမိအောင်မြင်မှုသာမက နိုင်ငံ့ရဲ့ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သူတွေဆိုရင် အရမ်းကို လေးစားချီးကျူးဖို့ ကောင်းမှာပါ…. ခုပြောပြချင်တာကလည်း အသက်အားဖြင့် ငယ်ရွယ်သေးပေမဲ့ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ကြိုးစားပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကို ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကလေးလေး ၂ ယောက်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. […]